နိုင်းမြစ် | ခရီးသွားသတင်း
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးမြစ်တစ်စင်းဖြစ်သည် နိုင်းလ်မြစ်။ အဲဒါကိုကြီးမားတဲ့ Halo မရှိဘူးဆိုတာမပြောပါနဲ့ နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ, စိတ်ကူး, အနှစ်တစ်ထောင်ပုံပြင်များကဝိုင်းမထားသော။ ဤသည်သည်နိုင်းလ်မြစ်ဖြစ်ပြီးသူ၏အမည်မှာစူးစမ်းလိုစိတ်ကိုသာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၎င်းသည်သူသည်အီဂျစ်လူမျိုးများနှင့်သူတို့၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ထာဝရဆက်နွယ်မှုရှိနိုင်ပါသလော။ အခြားဘုရားများပြောသောရွှေသဲများနှင့်ဘုရားကျောင်းများကဝိုင်းရံထားသည့်အညိုရောင်လမ်းကြောင်းနှင့်၎င်း၏အမည်နှင့်ရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သလား။ ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာပြီးဤအကြောင်းကိုအနည်းငယ်လေ့လာရန်လိုသည် အာဖရိက၏မြစ်ကြီး.
၎င်းသည်အာဖရိကရှိအကြီးဆုံးမြစ်ဖြစ်သည် y နိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံဖြတ်ကျော် တိုက်ကြီးမှသည်မြေထဲပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းသို့ကျသွားသည်အထိဖြစ်သည်။ ကိုင်ရိုနှင့်အလက်ဇန္ဒြီးယားမြို့သည်၎င်း၏ကြီးမားပြီးကြွယ်ဝသောမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင်ရှိသည်။ နိုင်းလ်မြစ် တိုင်းတာ 6.853 ကီလိုမီတာ ဒါအမေဇုန်နောက်ကွယ်မှာ၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယအရှည်ဆုံးမြစ်ဖြစ်သည်.
ကွဲပြားခြားနားသောရှာဖွေရေးကနေ ဗစ်တိုးရီးယားအိုင်သည်၎င်း၏ပထမဆုံးရင်းမြစ်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသည်, သို့သော်ဒါဟာအိုင်၌စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရွယ်အစားအများအပြားမြစ်လက်တက်မြစ်များရှိသည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့အနက် Kagera မြစ်သည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငြင်းပွားစရာတချို့ရှိနေတယ်၊ ​​ဒါကဒီမြစ်လားဒါမှမဟုတ်အခြားတစ်ခုလား၊
အမှန်တရားမှာမူရင်းဇာစ်မြစ်ကိုသိရှိခြင်းသည်အနည်းငယ်ခက်ခဲသော်လည်းပုံသဏ္takesာန်ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်း၏လမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းသည်မခက်ခဲပါ။ ယူဂန်ဒါရှိ Ripon Falls တွင် Victoria Victoria မှထွက်ခွာကာ Kyoga ရေကန်သို့မရောက်မှီကီလိုမီတာ ၁၃၀ ခန့်တွင် Victoria Nile ဖြစ်လာသည်။ မြစ်၏နောက်ဆုံးအပိုင်းကီလိုမီတာ ၂၀၀ ခန့်သည်အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှ စတင်၍ အနောက်ဘက်သို့စီးဆင်းကာ Karuma ရေတံခွန်သို့ရောက်ရန်မြောက်ဘက်သို့ကြီးမားသောအလှည့်ကျစေသည်။
ထိုအရပ်မှ Murchison Falls ကို ဖြတ်၍ အဲလ်ဘတ်ရေကန်သို့ရောက်ရှိပြီးမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အိုင်မှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်မြစ်သည်ယူဂန္ဓာကိုဖြတ်ကျော်ပြီးဟုလူသိများသည် Nile Albert။ ထို့ကြောင့်ဆူဒန်တောင်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိပြီး Achwa မြစ်နှင့် ပေါင်း၍ ၎င်း၏ရေတွင်ဆိုင်းနေသောရွှံ့ကြောင့်၎င်း၏အမည်နှင့်အရောင်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲသည်။ တကယ်တော့ဒါဟာအဖြစ်လူသိများသည် White Nile ဒါအတွက်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ဆူဒန်နိုင်ငံသို့ ၀ င်ရောက်လာပြီးတွေ့ဆုံခဲ့သည် အပြာရောင်နိုင်းလ်။
ဆူဒန်မှတစ်ဆင့်မြစ်၏လမ်းကြောင်းသည်သိလိုသည်။ ရေတံခွန်ခြောက်ခုနှင့် Nasser အိုင်ထဲသို့ ၀ င်သည်အထိခွဲခြားထားသောလမ်းကြောင်းသည်များသောအားဖြင့်အီဂျစ်အလံအောက်တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဒီမှာကျော်လွန်ပြီးဒီမှာပါ Aswan ဆည်ဤရေကန်၏မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင်နိုင်းလ်သည်၎င်း၏သမိုင်းဝင်လမ်းကြောင်းဆီသို့ပြန်သွားပြီးတူညီသောရေကာတာကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကိုင်ရိုမြောက်ဘက်တွင်မြေထဲပင်လယ်သို့စီးဝင်သောအကိုင်းအခက်နှစ်ခုဖြင့်ခွဲထားသည်။ Rosetta ဌာနခွဲသည်အနောက်ဘက်တွင်ရှိပြီး Damietta ဘဏ်ခွဲသည်အရှေ့ဘက်တွင်မြစ် ၀ ကျွန်းပေါ်ဒေသဖြစ်သည်။
အနှစ်ချုပ်, နိုင်းလ်သည်အဓိကသင်တန်းသုံးမျိုးဖြစ်သောအပြာရောင်နိုင်းလ်၊ အဘဘာရာနှင့်အဖြူရောင်နိုင်းလ်တို့ဖြစ်သည်။ နိုင်းလ်ဟူသောအမည်သည်ဂရိမှဆင်းသက်လာသည် Neilos သို့မဟုတ်လက်တင်စကား နိုင်းလ်စ်ချိုင့်ဝှမ်းသို့မဟုတ်ချိုင့်ဝှမ်းမြစ်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိသောဆီးမိုက်မြစ်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကမြစ်သည်အခြားမြစ်များနှင့်မတူဘဲတောင်ဘက်မှမြောက်ဘက်သို့စီးဆင်းလာပြီးယခုနှစ်ပူပြင်းသည့်ရာသီတွင်ရေကြီးခြင်းသည်ရာစုနှစ်များစွာကြာနက်နဲသောအရာဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မြို့များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအတိအကျခွင့်ပြုခဲ့သည်။
နိုင်းလ်မြစ်နှင့်ပတ်သက်သောဤအချက်အလက်များကိုရှင်းလင်းပြီးနောက်အမှန်တရားမှာထိုအရာဖြစ်သည် အဲဂုတ္တုပြည်၏စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏အနည်းဆုံးရှေးဟောင်းအီဂျစ်ကနေ။ ၎င်းသည်ကျောက်ခေတ်ကတည်းကထိုမြေများ၏ဘဝကိုလမ်းညွှန်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူထင်ရှားသည်။
အီဂျစ်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်မူ၎င်းသည်အခြေခံကျသည်။ တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်မြစ်သည်၎င်း၏ချောင်းများကိုကျော်ဖြတ်ပြီးအလွန်ကောင်းသောမြေသြဇာဖြစ်စေသည့်အနည်အနှစ်များကိုသိုလှောင်ထားသည် ဤတွင်ရှေးအီဂျစ်လူတို့သည်ဂျုံ၊ ကျူစက္ကူနှင့်အခြားမျိုးစေ့များစိုက်ပျိုးကြသည် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူတစ် ဦး ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသည်။ ဒါ့အပြင်မြစ်တစ်ဖြစ်ခဲ့သည် ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း တစ်ချိန်တည်းတွင်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအခြားလူများနှင့်လည်းပြည်သူလူထု၏တိုးတက်မှုအတွက်အကျိုးရှိသည်။
အစားအစာ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအပြင် နိုင်းမြစ်သည်အီဂျစ်လူမျိုးများအတွက်ဝိညာဏထူးခြားသည်။ ဖာရောသည် Hapis နှင့်အတူရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုယုံကြည်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မြစ်သည်သေပြီးနောက်ဘဝနှင့်အသက်တာအကြားလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ အရှေ့ဘက်တွင်မွေးဖွားကြီးထွားမှုနှင့်အနောက်ဘက်တွင်သေခြင်းတို့တည်ရှိသည်။
သင်္ချိုင်းအားလုံးသည်နိုင်းမြစ်အနောက်ဘက်တွင်ရှိသည်။ ရှေးအီဂျစ်လူမျိုးတို့၏ပြက္ခဒိန်သည်မြစ်၏သံသရာသုံးခုပေါ်အခြေခံသည်သီးနှံရာသီ၊ လေးလရှိသည့်ရာသီတစ်ခုစီသည်စိုက်ပျိုးမြေ၊ ကြဲခြင်းနှင့်ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
နိုင်းလ်တွင်မည်သည့်တိရစ္ဆာန်နှင့်အပင်များနေထိုင်ကြသနည်း။ ဒါဟာareaရိယာ, ဆည်မြောင်းနှင့်မိုးပမာဏပေါ်မူတည်သည်။ အချို့ဒေသများတွင်မြစ်ပေါ်တွင်အပူပိုင်းဒေသရွာသွန်းခြင်းကြောင့်အပူရှိန်နှင့်အတူပိုမိုထူထပ်သောသစ်တောများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် အပူပိုင်းသစ်ပင်များကိုများစွာသောအမျိုးမျိုး အပင်များကဲ့သို့သောငှက်ပျောသီး၊ အီဘိုနီ၊ ၀ ါးသို့မဟုတ်ကော်ဖီချုံများကဲ့သို့သောအပင်များ။ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးကျဲပါးသောအသီးအရွက်များ၊ အလတ်စားအပင်များနှင့်နှစ်ရှည်မြက်ပင်များနှင့်အတူမြက်ခင်းများလည်းရှိသည်။
ဆူဒန်နိုင်ငံတွင်မိုးပိုရွာသွန်းပြီးရေကြီးသည့်နေရာများရှိရာထိုနေရာသည်ထိုနေရာတွင်ဖြစ်သည် ကျူရီ၊ ဝါးရှည်၊... မြောက်ဘက်တွင်ပိုမိုနည်းပါးသည်နှင့်နောက်တွင်အပင်များသည်ရှားပါးပြီးတစ်ချိန်ကသဲကန္တာရကိုမွေးဖွားပြီးမိုးရွာပြီးနောက်အပင်များသေသည်။ အီဂျစ်ကိစ္စတွင်နိုင်းလ်မြစ်အနီးရှိဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်ဆည်မြောင်းနှင့်ကောက်ပဲသီးနှံများကြောင့်ဖြစ်သည်။
နိုင်းလ်၏သတ္တဝါနှင့်စပ်လျဉ်း။ ငါးမျိုးကွဲများစွာရှိသည် မြစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက်တွင်ပုံမှန်အတိုင်း၊ ငါးခူ၊ ကျားငါး။ အမှန်တရားမှာမြစ်ငါးအများစုသည်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများဖြစ်သော်လည်း Aswan ရေကာတာတည်ဆောက်ပြီးကတည်းက၎င်းတို့သည်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသို့မဟုတ်လျော့နည်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။
လည်း မိကျောင်းတွေရှိတယ်နိုင်းလ်အများစုတွင်နိုင်းလ်မြစ်၏မြောက်ဘက်ရေကန်များသို့မရောက်ရှိနိုင်သော်လည်းအခြားတွားသွားသတ္တဝါများတွင်လိပ်၊ အိမ်မြှောင်နှင့်မျိုးစိတ်အနည်းဆုံး ၃၀ ရှိသည်။ မြွေများ ဝက်အဆိပ်အပြင်း။ အဆိုပါ hippo? တစ်ချိန်ကမြစ်ရေတစ်လျှောက်လူ ဦး ရေပေါများသော်လည်းယနေ့တောင်ပိုင်းတွင်သာတွေ့ရှိရသည်။
ပထဝီဝင်သမိုင်း၊ သမိုင်း၊ မြစ်သည်ဤအရာအားလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်မြစ်သည်ဤအချက်များကြောင့်လည်းသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အမှန်မှာလူသားသည်၎င်း၏သမိုင်းတွင်နိုင်းလ်မြစ်ကိုအကြီးကျယ်ဆုံးပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် Aswan ဆည်။ ဆည်ကို ၁၉၇၀ တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ပေ ၂၃၀ မြင့်သည် လေးမီတာနီးပါးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ထုထည် ၄၄ သန်းကျော်ကုဗမီတာနှင့်အတူ။ Nasser ရေကန်သည်စွမ်းအင်ပမာဏ ၁၆၉ ဘီလီယံကုဗမီတာရှိသည်။
၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လိုအပ်သည် အဘူ Simbel ၏ရှေးဟောင်းဗိမာန်တော်၏တည်နေရာပြန်လည်ထာဝရရေအောက်ရောက်ခြင်းနာကျင်မှု။ မြို့များစွာကိုလည်းအီဂျစ်နှင့်ဆူဒန်နိုင်ငံများသို့ပြောင်းရွှေ့ရသည်။ ဤဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူသမိုင်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အီဂျစ်များသည်မြစ်ရေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး၎င်း၏ရေအသုံးပြုမှုကိုအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့သည်။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း နိုင်းမြစ်သည်အာဖရိကဘဏ္aာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဂုတ္တုပြည်သို့သွားသောအခါ၊ ထိုလှေဖြင့်လှည့်လည်။ အစဉ်အလာလှေများဖြင့်လှည့်လည်သွားလာရန်ခရီးသွားလာခြင်းကိုမမေ့ပါနှင့်။ မြစ်၏ကြယ်များကိုကြည့်ပါ။ ကမ်းရိုးတန်းများ၊ ဗိမာန်များ၊ ကောင်းကင်ရှိနေကိုကြည့်ပါ။ ဇာတ်လမ်း၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်ခဏခံစားပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာဖရိကတိုက် » အဲဂုတ္တုပြည်၌ » နိုင်းလ်မြစ်